अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा १२ भन्दा कम बल खेलेर ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित हुने तीन खेलाडी
एकदिवसीय होस् वा टी–२० क्रिकेट । सीमित ओभरको क्रिकेटको आफ्नै रमाइलो छ । वानडे र टी–२० मा पछिल्लो समय झन् आक्रामक ब्याटिङ देखिन थालेको छ । त्यसमध्ये टी–२० मा थप रोमाञ्चक दृश्य देख्न पाइन्छ ।
हरेक खेलाडीको लक्ष्य अन्ति ओभरमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्ने हुन्छ । धेरैले त्यो लक्ष्य भेटाउँछन् पनि । अन्तिम ओभरमा पाएको अवसरको फाइदा उठाएर खेलाडीहरू टिमको ‘हिरो’ सावित हुन्छन् । यही कारणले क्रिकेटलाई अनिश्चितताको खेल पनि भनिन्छ । यसैबीच, आज अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा एक खेलमा १२ बलभन्दा कम खेलेर ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित हुने तीन खेलाडीको चर्चा गर्दैछौं
३. मोइन अली : इंग्ल्याण्डका स्टार अलराउन्डर मोइन अलीले एकपटक दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध शानदार ब्याटिङ गरेका थिए । १४ फेब्रुअरी २०२० मा उनले ११ बलमा ३९ रन बनाए । यस क्रममा अलीको ब्याटबाट ४ छक्का र ३ चौका निस्कियो । उनकै आक्रामक ब्याटिङमा सो खेलमा इंग्ल्याण्ड२ रनले विजयी भएको थियो ।
२. जोस बटलर : मोइन अली जस्तै जोस बटलरले पनि सन् २०१२ मा दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध आक्रामक पारी खेले । उनले १० बलमा दुई चौका र दुई छक्काको मद्दतमा ३२ रन बनाए । बटलरको शानदार इनिङ्सपछि इंग्ल्याण्डले खेल जित्यो । र, उनी खेलको ‘म्यान अफ द म्याच’ घोषित भए । खेलमा बटलरको आक्रामक पारीलाई जितको आधार मानिएको थियो ।
३. दिनेश कार्तिक : दिनेश कार्तिकको एक पारी अहिले पनि धेरै समर्थकको मनमा ताजै छ होला । सन् २०१८ मा श्रीलंकामा भएको निदाहास ट्रफीको फाइनलमा उनले ८ बलमा अविजित २९ रन बनाएका थिए ।
खेलमा कार्तिकले अन्तिम बलमा छक्का प्रहार गरे । उनकै छक्कामा भारतले बंगलादेशलाई ४ विकेटले हराउँदै उपाधि जितेको थियो । कार्तिकले आफ्नो पारीमा ३ छक्का र २ चौका प्रहार गरे । फाइनलमा बंगलादेश जित नजिक पुगेको थियो । तर, अन्तिम बलमा छक्का हिर्काउँदै कार्तिकले बंगलादेशको सपना समाप्त गरे ।